YAAB: Hooyada Cristiano Ronaldo Oo Aan Doonayn In Wiilkeedu Si Rasmi Ah U Guursado Hooyada Caruurtiisa - Ogow Sababta Yaabka Leh - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaYAAB: Hooyada Cristiano Ronaldo Oo Aan Doonayn In Wiilkeedu Si Rasmi Ah U Guursado Hooyada Caruurtiisa – Ogow Sababta Yaabka Leh
YAAB: Hooyada Cristiano Ronaldo Oo Aan Doonayn In Wiilkeedu Si Rasmi Ah U Guursado Hooyada Caruurtiisa – Ogow Sababta Yaabka Leh
Dolores Aveiro, hooyada dhashay weeraryahanka kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo warramayaa inaysan doonayn in wiilkeedu si rasmi ah u guursado saaxiibtiisa haatan ee Georgina Rodriguez oo dhashay badi carruurtiisa.
Ronaldo ayaa loo arkaa mid aad ugu faraxsan nolosha uu la wadaago gabadha dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Argentina oo ay haatan wada degan yihiin magaalada Manchester halkaas oo ay nolol qoys kula wadaagaan Cristiano Junior, Eva, Mateo iyo Alana.
Waxa la sheegayaa in Georgina ay ka sugayso inuu guur si rasmi ah uga codsado Ronaldo balse qoyska Ronaldo ayaa u muuqda kuwa caqabada ugu weyn ku noqon doona guurkooda.
Warar cusub ayaa sheegaya in Dolores Aveiro aysan doonayn in marnaba Georgina iyo wiilkeedu ay nolol qoys oo rasmi ah wadaagaan sababtoo ah inay Georgina u aragto mid kaliya u dan leh lacagta badan ee wiilkeeda.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in sidoo kale walaalaha la dhashay Cristiano Ronaldo ay u arkaan Georgina mid kaliya muraadkeedu yahay hantida wiilkooda.
Warkan ayaa imanaya xilli ay dhawaan Dona Dolores oo ah walaasha Cristiano Ronaldo ay sheegtay in uu xidhiidh wanaagsan kala dhaxeeyo Georgina isla markaana ay la dhacsan tahay taageerada ay siiso walaalkeed.
Awal maany is qabin ma kaftan bay ahayd sheekadoodu